अर्थ/सेयर – Page2– Online Kendra
नेपालकाे अार्थिक गतिविधि
एलपी ग्यास उद्योग संघको १० औ महाधिबेशन आजदेखि सुरु
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार ०८:३७ September 16, 2021
भदौ ३१, काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको २६ औ वार्षीक साधरणसभा हिजो सकिएको छ । आज १० औ महाधिबेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनले संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । यसका लागि अध्यक्षमा कुश प्रसाद मल्ली, सावरमोहल अग्रवाल र विजयहरी शर्मा दाबेदार रहेका छन् भने बरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि दिवान चन्द, मनोज कुमार दासको उमेदरी छ । त्यस्तै उपाध्यक्षको लागि लोकहर्ष शाक्य, र नविन रिजाल छन् भने, महासचिबमा कृष्णभक्त श्रेष्ठ र धर्मराज बड्तौला रहेका छन् । कोषध्यक्षमा आशिस जाजोदिया र सचिबमा अमित अग्रवाल रहेका छन् । सदस्यहरुमा बाबुराम…
Top Headline, अर्थ/सेयरएलपी ग्यास उद्योग संघ, महाधिबेशनLeaveacomment
किन घट्यो शेयर कारोबार ?
३० भाद्र २०७८, बुधबार १७:४० September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३०,काठमाडौँ । मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूच बुधबार पनि दोहोरो अंकले नै घटेको छ । नेप्से परिसूचक ४० दशमव २६ अंकले घटेर २ हजार ८ सय ८९ दशमलव ०३ अंकमा झरेको छ । बुधबार १ दशमलव ३७ प्रतिशतले बजार घटेको हो । यस अघि मंगलबार १८ अंकले परिसूचक घटेको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७ दशमलव १६ अंकले घटेको छ । कारोबार रकममा पनि उल्लास देखिएन । दिनभर भएका ७५ हजार ८ सय ९५ कारोबारबाट १ करोड ५ लाख…
अर्थ/सेयरकिन घट्यो शेयर कारोबार ?Leaveacomment
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई ‘आगन्तुक रिर्सोट’मा २३% सम्मको छुट
३० भाद्र २०७८, बुधबार १७:१९ September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३०,काठमाडौँ । पर्यटकिय गन्तव्य बनेपामा रहेको ‘आगन्तुक रिर्सोट’सँग गरिमा विकास बैंकले विभिन्न सेवा सुविधामा आर्कषक छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । बैंकले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार गरिमा विकास बैंकका डेविट कार्ड तथा मोबाईल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले रिर्सोटको रुममा २३% र फुड एण्ड वेभरेजमा १४% छुट पाउनसकिने छ । साथै, ‘द एभरेष्ट होटल’सँग पनि गरिमा विकास बैंकले पुरानो सम्झौतालाई परिमार्जित गर्दै होटलको रुम, फुड एण्ड वेभरेज र स्पा मेम्बरसीप प्याकेजमा समान १५% छुट सम्बन्धि सम्झौता गरेको छ ।
अर्थ/सेयरगरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई ‘ल्याण्डमार्कमा ३५ प्रतिशत सम्मको छुटLeaveacomment
ग्लोबल आइएमई बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
३० भाद्र २०७८, बुधबार १७:१० September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३०,काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा विश्वविद्यालय क्याम्पस, प्राणीशास्त्र (जुलोजी) विभाग परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । वृक्षारोपण कार्यक्रमको समुद्घाटन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुलोजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक तेजबहादुर थापातथा ग्लोबल आइएमई बैंक, कीर्तिपुर शाखा प्रबन्धक शोभा न्यौपानेले संयुक्तरुपमा गर्नुभएको थियो । विश्वविद्यालय क्याम्पस, जुलोजी विभाग परिसरको हरियाली दृश्य र स्वच्छ विश्वविद्यालय परिसर निर्माणको अभियानअन्र्तगत विभागीय भवनदेखि मूल सडकसम्मकरिब १०० चाँप, धुपी तथा विभिन्न प्रजातीका विरुवाहरुरोपण गरी विरुवाको सुरक्षाको लागि “ट्रि गार्ड” समेत लगाइएको छ । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय जुलोजी विभागका प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद पराजुली र प्रेमबहादुर…
अर्थ/सेयरग्लोबल आइएमई बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयLeaveacomment
खाने तेलमा भएको मुल्यवृद्धिमा नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको ध्यानाकर्षण
३० भाद्र २०७८, बुधबार १५:३१ September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३१,काठमाडौँ । हालका दिनहरुमा खाने तेलमा भएको मुल्यवृद्धि सम्वन्धमा नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आएको समाचारहरु प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । संघले प्रशोधित खाने तेलमा भएको मुल्यवृद्धिका विषयमा वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागवाट समेत पटक–पटक भएको सोधपुक्षका सम्वन्धमा वास्तविकता समेत सार्वजनिक गरेको छ । संघमा आवद्ध रहेका २० वटा प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले नियमित रुपमा आफ्ना उत्पादनहरु सोयाविन तेल, सनफ्लावर तेल ईत्यादी उत्पादन गरी स्थानिय वजारमा साथै निकाशी समेत गर्दै आईरहेका छन । उद्योगहरुलाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाविन तेल,…
अर्थ/सेयरखाने तेलमा भएको मुल्यवृद्धिमा नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको ध्यानाकर्षणLeaveacomment
३० भाद्र २०७८, बुधबार १२:४३ September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३०,काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ६ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार सुन तोलामा ६ सयले बढेर ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार सुन तोलाको ९० हजार ६ सय कायम गरिएको थियो । तेजावी सुन तोलाको ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज चाँदी तोलाको एक हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार पनि चाँदी तोलाको एक हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
अर्थ/सेयरचाँदीको मूल्य स्थिर !, सुनको मूल्य ६ सय रुपैयाँले वृद्धिLeaveacomment
३० भाद्र २०७८, बुधबार १२:०० September 15, 2021 OnlineKendra
भाद्र ३०,काठमाडौँ । मोवाइल बैंकिङबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीम जोड दिन भन्दै मोवाइल बैंकिङबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क तोकिदिएको हो । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म अधिकतम शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दा रकम पठाउन चाहनेले २० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ५० हजार भन्दा माथि एक लाख रुपैयाँसम्म २० रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि ३०…
अर्थ/सेयरमोवाइल बैंकिङबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क सस्तोLeaveacomment
३० भाद्र २०७८, बुधबार ०९:५७ September 15, 2021
भदौ ३०, काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुख्य लगानी रहेको नेपाल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ‘नमस्ते पे’ सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयको तयारी पश्चात कम्पनीले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । मोबाइल वित्तीय सेवामार्फत वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्न तथा डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले २०७६ वैशाख १९ गते नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच औपचारिक समझदारी भएको थियो । त्यो सम्झौताअनुसार टेलिकमको सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले…
अर्थ/सेयरनमस्ते पे वालेट, नेपाल टेलिकमLeaveacomment
काठमाडौँ । नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो अर्धजलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भएका छन् । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माणको ढाँचा र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालिनेछ । नेपालका तर्फबाट बङ्गलादेशलाई विभिन्न पाँच आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये बङ्गलादेशले सुनकोशी तेस्रोमा सहमति जनाएपछि मंगलबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सो परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारीस्तरमा नै आयोजना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमति यो पहिलो हो । दुई देशको संयुक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र…
अर्थ/सेयरविद्युत्, सुनकोशी तेस्रो अर्धजलाशयुक्त आयोजनाLeaveacomment
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १७:१९ September 14, 2021 OnlineKendra
भाद्र २९,काठमाडौँ । शेयर कारोबार रकममा गिरावट आएको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार कबिर ४ अर्ब रुपैयाँले शेयर कारोबार रकम घटेको छ । एकैदिन २१ अर्ब रुपैयाँसम्मको शेयर कारोबार भएको बजारमा बुधबार जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै शेयर कारोबार भएको छ । यस अघि सोमबार अर्ब २९ करोड ५ लाख ५४ हजार १ सय ५५ रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो । दिनभर भएका ५९ हजार ८ सय ५४ कारोबारबाट १ करोड ६ लाख ३९ हजार ८ सय २६ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् । जसबाट ५ अर्ब १९ करोड ५२…
अर्थ/सेयरशेयर कारोबार रकममा गिरावटLeaveacomment